Umdwebo Osizwe we-Ultrasonically Wasiza, Amapayipi Namaphrofayili (i-UAD) - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza i-ultrasonically vibrating wire die holder esebenza nge-wire standard ifa ngo-42mm ububanzi obungaphandle. Ukuqubuka kwe-ultrasonic kunciphisa ukuhlukumeza komugqa okudingekayo ekunciphiseni ubukhulu kakhulu. Lokhu kungasetshenziselwa ukwandisa isivinini segqa noma ukwandisa ukunciphisa usayizi ngalunye isinyathelo sokudweba.
Ngalolu buchwepheshe, izinto eziningi ezifana nethusi, insimbi noma i-aluminium zingadonswa ngamanzi ahlanzekile esikhundleni salowoyela noma isobho lokudweba.
Kungani kuhlanganiswa i-ultrasonics nge-drawing drawing?
Ukudweba kwezintambo zocingo kudinga amandla ukunqoba ukuqubuzana nokubuyisela kabusha indaba. Emgqeni wokudweba ovamile, lo mandla uvela e-capstan ejikelezayo, kuphela. Amandla okugudluza kwenduku yentambo iphakama ngesivinini esisheshayo, i-wire diameter nobubanzi bokunciphisa ububanzi. Amandla amakhulu nokunika amandla yizici ezibalulekile zokudweba kwezintambo ezincane, ngoba isilinganiso se-circumference ukuya kwesigaba siphezulu sezintambo ezincane zocingo. Lokhu kunciphisa isivinini selayini lokudweba nokunciphisa ububanzi ngesinyathelo ngasinye sokudweba.
Umdwebo we-ultrasonically ukusiza izintambo, amapayipi kanye namaphrofayela kunciphisa amandla okuqeda futhi ngaleyo ndlela ingozi yezinhlanzi.
ultrasonically isidlidliza wire die umnikazi
Usebenza kanjani nge-ultrasonically ngomsebenzi wokudweba ucingo?
Ultrasonically basiza ukudweba kudlulisela imvamisa ephakeme longitudinal vibration kuya wire die. Imvamisa evamile yokudlidliza ingama-20kHz, ukuhamba kwezinsimbi kungaba yi-100 micron (pk-pk). Ukuphakama kwesilinganiso phakathi kweviquity yethrifikhi yesikhali kanye nejubane lentambo yensimbi, engezansi kungaba namandla okugxila emgqeni wocingo. Ngakho-ke umdwebo we-ultrasonically wanika amandla uvumela isivinini esisheshayo somugqa wokudweba noma ukunciphisa usayizi omkhulu kwesinye isinyathelo sokudweba nganoma imuphi umkhawulo wokucindezeleka owenziwe. Ukunciphisa amandla okuqamba kwenza i-ultrasonically inikwe amandla okudweba kakhulu kunazo zonke ezincane zempahla kanye nemigqa engavamile, njengamapayipi.
vibration longitudinal of the wire die
Ngingayisebenzisa i-ultrasonic wire drawing?
Umdwebo wezintambo ezisekelwa nge-ultrasonically usebenza ngesivinini somugqa we-300m / min (900ft / min). I-standard ultrasonic die holder isebenza ngocingo ifa ngo 25mm no 42mm ububanzi obungaphandle. Abanikazi bokufa be-Ultrasonic ngobukhulu obunye basendleleni yokuthuthukiswa futhi bayatholakala ngesicelo.
Uhlobo olujwayelekile lwangaphakathi ububanzi obungaphakathi ngaphakathi kusuka ku-0.01mm kuya ku-8mm (AWG # 40 kuya ku-AWG # 0).
Yini Edingekayo Ukudweba Nge-Ultrasonically Assisted?
I-UAD isebenzisa i-wire standard yakho. I-resonator yama-ultrasonic – owaziwa ngokuthi i-sonotrode – ithatha isikhundla somuntu ojwayelekile wokufa. Le sonotrode iyindlela entsha ekhethekile ye-Hielscher Ultrasonics. Idlulisa izidakamizwa ze-ultrasonic longitudinal ngokuphumelelayo kwi-wire die. Ukuze ulondoloze isikhala sokufaka, umshayeli we-ultrasonic – futhi owaziwa ngokuthi i-transducer – ivuselela i-sonotrode kusuka phezulu. Ukusetha okujwayelekile kwe-UAD kudinga isikhala esingaphansi kuka-250mm.
Izidakamizwa ze-ultrasonic zenziwa ngamadivayisi ethu ajwayelekile we-ultrasonic, njenge: UIP1000hdT (1.0kW), UIP1500hdT (1.5kW), UIP2000hdT (2.0kW) noma i-UIP4000 (4.0kW). Lezi zinyunyana ziqhuba izinqubo ezihlukahlukene emisebenzini engu-24h / 7d emhlabeni jikelele. Amandla adingekayo ancike ngesivinini somugqa, impahla kanye nobukhulu. Iyunithi ye-ultrasonic iyashintshashintsha, uma intuthuko ejubane lomzila yenza amandla engeziwe ayadingeka.
Ungaphinda uvuselele noma yimuphi umdwebo odwe ngaphambilini okhona nge-ultrasonic system kalula. Abakhiqizi abaningi be-wire line bajwayele ukufakwa noma i-retrofit yesistimu yethu ye-ultrasonic. Enye yemishini emisha inekhala elinikezwe uhlelo lwe-ultrasonic retrofit, kakade.
Sicela usitshele ngezidingo zakho zokudweba. Sizojabula ukusebenza nawe ukuhlanganisa ama-ultrasonics ohlelweni lwakho nomshini. Sicela ucacise izinto, isivinini somugqa, ukushayisana, umkhawulo wezinkinga kanye namaditha. Iyini injongo yakho yenqubo? Singakwazi ukugijima ukuhlolwa komcibisholo wocingo ngento yakho kwisistimu yokudweba esiteji esisodwa.